बुद्धको देशमा कोरोनाको चपेटा
विश्वनाथ खरेल बिहीबार, वैशाख २५, २०७७ मा प्रकाशित
संसारमा चन्द्रलोक देखि लिएर सूर्यलोकसम्म जान तरखर भएका विकसित देशहरुका मानववर्गले शस्त्रअस्त्रको होडबाजीका कारणले प्रकृतिको दोहन धेरै हुन गई प्रकृतिमाथि नै विजय गर्ने आटलाई कोविड–१९ ले झँस्काई दिएको छ । मूलतः विश्वमा अहिले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको खाँचोलाई महसुस गरिरहेको छ । जुन भूमिबाट गौतम बुद्धले विश्व–शान्तिको लागि आफ्नो अभियान प्रारम्भ गरेका थिए, त्यहि भूमिमा आज शान्तिको कुनै आभाष छैन जुन सबै मानवहरुको लागि दुःख र आत्मा ग्लानीको कुरा हो ।
शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ –”सज्जनको संसर्गबाट नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ ।“ यसै अनुरुप बुद्व भन्ने गर्नुहुन्थ्यो –राम्रो काम गर्नका लागि नै मानिसको जन्म भएको हो । अन्यथा पशुपंक्षीको जीवन र मानिसको जीवनमा के नै फरक भयो र ? मानिसलाई ईश्वरले राम्रो कामको लागि नै यस धर्तिमा पठाएका हुन् । राम्रो काम गर्नु र लोकको सेवा गर्नु प्रत्येक मानवको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो । जगतको कल्याण एवं सुख प्राप्ति केबल अंहिसाबाट मात्र संभव छ । समयको मार्ग अपनाउने व्यक्ति नै महान हुन्छ । हिंसाको बाटो अपनाउने व्यक्तिले एकछिन चिन्ताको अनुभव गरे तापनि अन्तत नासको फल कष्टप्रद नै हुन्छ । यसरी सत्य बैशाख पूर्णिमा बास्तबमै पावन दिन हो , जुन दिन महामानव गौतम बुद्धका जन्म बोधिज्ञान प्राप्त र महापरिनिर्वाण भएको थियो । यसरी तिनै योग एकै दिनमा परेका संसारमा बिरलै पाइन्छन् । यस्तो अलौकिक शक्ति पाएका महामानव गौतम बुद्धको सम्झनामा विश्वले बैशाख पूर्णिमाको अवसरलाई बुद्वजयन्तीको रुपमा मनाउने गर्दैआएको छ ।
बौद्ध धर्मका प्रवर्तक गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधनको एकमात्र छोरा थिए । यिनी कपिलबस्तु राज्यमा इसापूर्व ५६३ वर्ष पहिले मायादेवीको कोखबाट जन्मेका थिए । यिनको नाम सिद्धार्थ थियो । यिनी शाक्य राजावंशका राजकुमार थिए । यिनी विलक्षण प्रतिभाशाली व्यतिmत्व भएका थिए । यिनी गरीब गुरुवा व्यक्तिहरुलाई कसरी उदार गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मनन अहोरात्र गरिरहन्थे । उनका पिताले आफ्नो छोराको संन्यासी रुप धारणा गर्ने देखेर २१ वर्षको उमेरमै यशोधरा नामकी एक राजकुमारी संग विवाहा गरिदिए । यसरी यिनले दश वर्षसम्म घर व्यवहारमा गृहस्थिको रुपमा जीवन विताए । यिनले बिरामी, बुढोको साथै एक दिन मुर्दा देखेर चिन्ताले यिनको दिलमा निकै नै ठूलो चिसो पस्यो । यी सबैकुराहरुलाई देखेर मानिस किन यस्तो झन्ंझटमा फस्दछन् यो भन्दा त संयासी हुनु नै राम्रो हो ।
यसरी समयले आफ्नो गति लिइरहेको थियो । यिनको तीस वर्षको उमेरमा एउटा छोराको जन्म भयो । यसर्थ छोरा प्रति माया र मोहको जालोले फसिएला भनेर एक दिन मध्ये रातमा आफ्नो घर छोडेर ज्ञानको खोजिमा हिडें । त्यसपछि उनको संसारप्रति भोग विलासलाई परित्याग गरी एउटा ब्रहाणको चेलो बने । उनी धुम्दैं फिदैं बोधगाया भन्ने ठाउंमा पुगे । उनले यसै बृक्षको बोट मुनि बसेर छवर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर बसे । यसै कारणले गर्दा ज्ञान प्राप्त भयो । त्यसरी आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सबैलाई सुनाउन हिडे । यसै बेला देखि यिनलाई गौतम बुद्धको नामले प्रख्यात भए । यसबेला उनको उमेर ३७ वर्षको थियो । आफुले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई संसार भरी फैलाउन मानववर्गमा रहेको दुःख तथा बेदनालाई हटाउन नेपाल लगायत सारा विश्वका बोद्ध धर्मावलम्वीहरुलाई प्रचार प्रसार गर्दै हिडे ।
बर्तमान नेपालको गौरवलाई ऐतिहासिक आधारमा विवेचना गर्दा यहां बौद्ध धर्मावलम्वीहरुको गौरव गाथाले आज पनि उतिकै प्रेरणा दिएको छ । शान्तिनायक गौतम बुद्धको आज विश्वमा जुन प्रतिष्ठा आर्जित भएको छ । त्यसबाट बौद्ध संस्कृति नेपालको गरिमा पनि उतिकै महान रहेको छ । भगवान् गौतम बुद्धले यस तपोभूमिको कुशिनगरलाई ८० वर्षको उमेरमा छोडेर गए । शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्ध भन्नु हुन्छ —“सज्जनको ससर्गबाट नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ ।”
यसै अनुरुप बुद्ध भन्ने गर्नुहुन्थ्यो राम्रो काम गर्नका लागि नै मानिसको जन्म भएको हो । अन्यथा पशुपंक्षीको जीवन र मानिसको जीवन के नै फरक भयो र मानिसलाई पुर्खाले राम्रो कामको लागि नै यस धर्तिमा पठाएका हुन । राम्रो काम गर्नु र लोकको सेवा गर्नु प्रत्येक मानवको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो । यिनले आफ्नो जीवनसित सम्वन्धित चार घाम – बद्धिनाथ, रामेश्वर द्धारका र जगन्नाथ बौद्ध पावनस्थलहरु लुम्विनी, बोधगया, ऋषिपटन, कुशिनगर छन् । यसरी उपर्युक्त चार स्थलहरुको पवित्रतामाथि जोड दिइनामा पनि त्यहि नै आशय रहेको बुझिन्छ । यसैले यहि हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई अक्षुण्ण बनाई राख्नु छ भने पावनस्थलहरुको मनसा , कर्मणा आदर गरिनु नितान्त जरुरी छ बुद्धको ज्ञानबाट प्राप्त पाठहरु यस प्रकार छ – संसारमा दुःखले भरिएको छ, दुःखनै कारण भएको छ , दुःखलाई निर्वाहन गर्नुपर्छ, दुःखलाई निर्वाहन गर्ने उपाय के हुन ? आदि रहेका छन् ।
जगतको कल्याण एवं सुख प्राप्ति केवल अहिंसाबाट मात्र संभव छ । समयको मार्ग अपनाउने व्यक्ति नै महान हुन्छ । हिंसाको बाटो अपनाउने व्यक्तिले एकछिन आनन्दको अनुभव गरे तापनि अन्तत त्यसको फल कष्टपद नै हुन्छ । यसरी सत्य भगवान् हो यो नै कीर्तिको मूलद्धार र स्वर्गद्धार प्राप्तिको बाटो हो । ज्ञान, दर्शन, राम्रो चरित्र र आत्मा नै शास्वत छ । अतः अहिंसा र संयको अर्थ नै धर्म हो ज्ञान र कृपाको समन्वयबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ । कसैको निन्दा चर्चा वा अवहेलना कहिल्यै नगर्नु ।
प्रत्येक साल बैशाख पूर्णिमा दिनलाई बुद्ध जयन्तीको रुपमा मनाइदैं आएको कुरा सबैलाई विदित्तै छ । यससाल २५६४ औं बुद्ध जयन्ती बैशाख २५ गते २०७७ मा भव्यताका साथ मनाउन बौद्धमार्गीहरु लगायत सम्पूर्ण हिन्दूहरु पूृर्ण तयारीमा छन् । तर, आजको विश्वमा कोरोनाको कहालीलाग्दो चपेटामा भासिन पुगेको छ, शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्धले दिएको ज्ञानलाई सिरोधार्य गर्ने हो भने पूरा विश्वनै सुन्दर नगरी शान्तिक्षेत्र बन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला । शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् विश्वमा शान्ति र मैतीपूर्ण सम्वन्ध विकसित हुने आशा गरिएको थियो । युद्ध र शस्त्रास्त्र होडवाजीको रोष, अशिक्षा, वेरोजगारी, खाद्यान्न अभाव जस्ता मानव चुनौतीको प्रतिकारनिम्ति अनुवाद हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । संसारमा फैलिएको महामारी रोग विरुद्ध अब मानव समुदायले प्रकृतिलाई संरक्षण र सवद्र्धन गर्ने बानीप्रति उजागर गर्ने नियम, कानुन आदि बनाउनु पर्ने आवश्कता परेको छ । तर, यसलाई विश्वले हेलचक्राई गरेको खण्डमा यसले अकै मोड लिन सक्ने देखिन्छ । यस्ता किसिमका समस्याहरुलाई विश्वले बेलैमा बुझने हो भने यो समस्या बेलैमा निराकरण हुनेमा विश्वस्थ हुन सकिन्छ ।